Uzijonga njani iiHops zeKholeji ezivela kwiisofa zakho - Ibhola Yebhola Ekhatywayo
Uzijonga njani iiHops zeKholeji ezivela kwiisofa zakho
Ixesha lebhola ekhatywayo lebhola ekhatywayo liqala ngolwesiHlanu, oko kuthetha ukuba amaqela e-NBA aya kuthumela ii-scouts zawo kwilizwe liphela, eqala ukuhamba kwawo ngokungagungqi, ukutya ehotele, kunye neqashiso kunye nebhasikithi eninzi. Ufuna ifayile ye- ukuthanda konke ukuze wenze umsebenzi wokuhlola umsebenzi wakho. Ukukhangela uyilo ayisiyiyo inzululwazi ngqo njengoko sizama ukuyenza, iscout eside sindixelela.
Qho ngonyaka amaqela ayila ibhasi yeelottery okanye abethe iJackpot kwindawo yesibini yokulala. Ayisiyonto yakutshanje le - uGeorge Gervin waya kwiminyaka yama-40 ngo-1974. Nokuba zingaphi na izixhobo zokwenza imali ezityala imali kuyilo, isavakala ingenangqondo. Ndingayibiza ngokuba luqikelelo olufundileyo, u-DraftExpress scout uJoshua Riddell uthi. Lonke iqela le-NBA elinokukwenza kukufumana lonke ulwazi abanoku… Ukuqikelela nokuba yiminyaka emithathu ezayo ayinakwenzeka, kungasathethwa ke ngalo lonke ikhondo lomsebenzi.
Ukukhangela i-NBA kunzima ngokwenene. Abantu baya kunkqonkqoza eli qela okanye elo qela ngenxa yokungalunganga, kwaye wonke umntu yingcali yokujonga ngasemva. Inyani kukuba zininzi izinto eziguquguqukayo, kuphela ezinye zazo ezinokulawulwa yi-NBA ngaphambili. Akukho sixa sokufundwa kwefilimu okanye ukujonga imvelaphi ngekhe kuqikelele ukuba uBen Simmons uzakunyathela unyawo lukaShawn Long (Shawn Long!) Ngexesha lenkampu yoqeqesho yeSixers. Mhlawumbi ungabetha ekukhetheni izinto ezininzi njengomphathi wenqanaba jikelele. Mhlawumbi ubuya kwenza ngcono. Kodwa inzondelelo ejikeleze uyilo ayisiyiyo malunga nokukhetha, imalunga nokufunyanwa. Kwaye unokufumana okuninzi ngqo ekhayeni lakho. Akukho nto efana nokuba phakathi kwabantu bokuqala ukuqaphela italente yexesha elizayo. Nguloo nto uqhuba uthando lwam ngokukhangela uyilo, kwaye nawe ungayibona loo nto.
Ukufumanisa ukuba zenziwa njani i-pros, ndithethe nama-scouts amabini kunye nomphathi omnye osebenza kwi-NBA kwaye ndinqwenela ukuhlala ndingaziwa, ke siza kubabiza ngokuba yi-Scout X, Scout Y, kunye ne-Scout Z; kwaye ndenza udliwanondlebe ne-DraftExpress scouts uMike Schmitz noJoshua Riddell kwirekhodi. Schmitz ngungqondongqondo ngasemva I-DX Ukuhlola iividiyo, kunye URiddell upapasha eyakhe incwadana yeedrafti.
Nantsi indlela yokuqeqesha iliso lakho ukuba libe siscout scout:
Gxila kokuNgaphezulu kweBhola
Xa ubukele umdlalo, kuyindalo ukubukela ibhola. Lo ngumkhwa ombi kubakhuseli, kwaye ngumkhwa ombi kuwe. Ewe, ibhola ingumthombo wesenzo. Kodwa xa ukhangela umdlali othile, kufuneka ugcine amehlo akho kuye rhoqo, naxa engenalo iliwa. USchmitz ubiza le ndawo ukuba isithunzi. Xa ebona izithunzi, ulandelela indlela umdlali ayihambisa ngayo ibhola ngaphakathi kwetyala kunye nendlela azibeka ngayo kukhuseleko.
Kwenzeka njani ukuba umtoli avule kangaka? UJulius Randle uya ngqo ezantsi kwiscreen njengenundu elitsaleleke ekukhanyeni. Bekufanele ukuba uye wayigqiba ukuze akhusele i-3.Ukuqonda ukuzikhusela kwakuyimpazamo enkulu ku-Randle xa wangena kwidrafti ye-2014 (kwaye yinto ayiphuculayo kancinci njengeLaker). Ngokugxila kumdlali ngamnye, uya kuqaphela i-pros okanye i-cons engapheliyo kwiphepha lomthetho.
ben afleck accountant
URandle wayengomnye wabadlali ababalaseleyo kumdlalo wekholeji, kwaye kwacaca ukuba ubuchule bakhe buya kuguqulela ngenxa Njani iibhodi ezixholiweyo. Apha, u-Randle umane ephatha umdlali awubethayo ukuba angene kwindawo ye-rebound kwaye ayirhole ngesandla esinye ngaphambi kokuzoba intlonti.
Kuphephe ukuzivalela kuVavanyo
Ngo-2013, Isizwe se-SB NguPaul Flannery ipapashiwe iprofayili yomphathi jikelele we-Suns uRyan McDonough, emva koko elilungu leofisi engaphambili yeCeltics. UFlannery ubhale ngendlela kaMcDonough yokukhangela: Isimo sakhe esifanelekileyo kukujonga ithemba lokudlala eyona midlalo yakhe mibi, imbi kakhulu kwaye iphakathi. UMcDonough wayefuna ukufumana umbono wesilingi yomdlali kunye nezinto azinikezelayo kwintsebenzo engaphantsi. Le fomathi iluncedo kubakhuseli besofa kuba inciphisa ukuzibophelela kwexesha elifanelekileyo. Awuyi kuba nakho ukubukela yonke imidlalo, utshilo uRiddell. Kodwa qiniseka ukuba uphonononge lonke ixesha lomdlali kwaye ubeke imidlalo oyibonileyo kwimeko yemveliso yakhe yexesha liphela.
Le ngcamango kufuneka ifikelele kwinto obukeleyo noyifundayo. Ndiyathemba ukuba uza Umkhombe ukufunda yonke into esiyibhalayo malunga noyilo, kodwa kuya kufuneka ulambele ulwazi oluvela kweminye imithombo ukuyiphepha iqela . Bukela iSchmitz's I-DX iividiyo kunye landela abavavanyi abangaphezulu kuyilo kwi-Twitter ngaphezu kwamagama amakhulu oshishino. Eyona nto intle eyenzekileyo kwikhondo lam lomsebenzi kukusebenza noDanny [Ainge] kuba uvulelekile, utshilo uMcDonough kuFlannery. Uya kuya kubafundi basekhaya kwaye athi, 'Ke ucinga ntoni?' Xa umntu obhukuda ibhola yomnyazi ecela umntu ophantsi ukuba afumane uluvo lwesibini, kuya kufuneka uphinde ufune isikhokelo.
Kuya kufuneka silwe nokucalucalulwa, okuza ngeendlela ezininzi, utshilo uScout Y, kudweliswa ezintathu ezona zixhaphakileyo: Esona Sikolo Sikhulu, i-All-American, kunye ne-March Madness Run. Kungenxa yokuba umntwana waya eKentucky kwaye wayenguMntu wonke waseMelika, oko akuthethi ukuba uya kuba ngumdlali obalaseleyo, utsho.
I-Scouts Y kunye no-Z banike umzekelo ofanayo wethemba elonyuswe yi-March Madness Run: Nik Stauskas. Ukuba bekungekho [Elite Eight] ukubaleka, ndiyathandabuza ukuba uStauskas ebezakuhamba phambili nge-10, utshilo uScout Z. uStauskas, obhalwe okwesibhozo ngooKumkani ngo-2014, uthatha amanqaku ayi-6.4 kumdlalo ngamnye ngeepesenti ezingama-32.4 kwikhondo lakhe lomsebenzi.
Eyona nto intle yokuthintela iziqendu zakho zomdlandla
Qhubeka ujonge iNBA
Kungenxa yokuba uya kuba ngumandlalo wokuhlola iikholeji zebhola ekhatywayo oko akuthethi ukuba kuya kufuneka uyigeze ecaleni i-NBA. Kubalulekile ukugcina ukuqonda malunga nendlela yeligi ehamba ngayo. Iindlela zitshintsha ngokwenyani indlela obajonga ngayo abadlali abohlukeneyo, utshilo uSchmitz. Imalunga nokuqonda i-NBA kwaye yintoni esebenzayo kwi-NBA.
Sele uyazi malunga neendlela eziphambili ze-NBA. Nawuphi na umdlali onokudubula ii-3s kakuhle uxatyisiwe, nokuba sithini isikhundla sakhe. Ukuma kwezinto ngokungafaniyo sisakhono seprimiyamu kuzo zombini iziphelo, ngakumbi kukhuselo ngokuchasene namaqela ahlala etshintsha ii-screens zebhola ekhatywayo. Phambili bekuthathelwa ingqalelo ukuba phakathi kweendawo ezingenazo izikhundla eziyinyani ngoku zenzelwe iligi ebekiweyo eya phambili enokudlala zombini kunye no-4. Amaqela amaninzi adlala abaphathi beebhola ezininzi endaweni yokusebenzisa unogada wenqaku elinye lesiko.
Ngaphezulu kwayo yonke into, gcinani engqondweni ukuba ungakanani umdlalo wezemidlalo. Kuya kufuneka uhlaziye inqanaba leNBA, apho abafana bebaninzi kwaye bade, utshilo uSchmitz. Utshintsho ukusuka kwikholeji ukuya kwi-NBA lukhulu. Ndicinga ukuba kuya kufuneka uqeqeshe iso lakho ngenxa yoko.
Hlahlela uhlobo lomzimba womdlali
UBrandon Ingram ujongeke ebhityile ngobusuku bokuyila #NBATwitter wamthiya igama UJack Skellington ukusuka Ubusuku obubi Phambi kweKrisimesi . Ukuba umdlali wakhiwe njenge-toothpick, usenkingeni ngaphandle kokuba unetalente ye-Ingram elite. Abantu baya kuthi umdlali angomelela, kodwa ayisiyonyani leyo ukuba abanaso isakhelo sokuxhoma inyama, utshilo uScout Y. Ukuba banesinqe esibhityileyo, imilenze ebhityileyo, amagxa amxinwa, abayi kuba nakho ukubeka amandla okuphatha ubungqongqo bexesha lonyaka.
Phantse yonke into elindelekileyo kufuneka ibe namandla, kuba bambalwa abangena kwiligi benomzimba opheleleyo. URiddell uthi ufunda ubungakanani bomdlali kunye nemidlalo ngaphambi kokuba afike kwisakhono sakhe esimiselweyo ukuze afumanise ukuba ingaba umdlali angakhuphisana na emzimbeni.
Umzekelo, i-Suns rookie uTyler Ulis elinganiswa nge-5-foot-9 kunye ne-149 yeepawundi kuyilo lwe-NBA ludibanisa, kwaye uScout Z undixelela ukuba akacingi ukuba umzimba ka-Ulis ungaphatha ubunzima obungaphezulu. Ayikokuphakama kwakhe okumbambayo njengakwisakhelo sakhe, utsho. Abadlali abancinci baphumelele kwi-NBA, kodwa bambalwa kakhulu abafumene impumelelo kumdlalo wokudlala kwi-150 ukuya kwi-160 yeepawundi. U-Isaiah Thomas ubude obulinganayo no-Ulis, kodwa ungqindilili, izihlunu ezili-185. I-Cavaliers rookie uKay Felder imfutshane nokuba mfutshane, kodwa inobunzima obusondele kwi-180 yeepawundi. U-Ulis unokuba nempumelelo kwiligi, kodwa umzimba wakhe ngumda wendalo ekufuneka ubalwe.
Unxibelelana njani noMdlali namaQela aDibeneyo?
Imibutho ye-NBA ichitha iiyure ezininzi iphanda yonke into kukho ukwazi malunga nethemba, ngaphakathi nangaphandle kwenkundla. Awunakho ukufumana olo lwazi ngaphandle kwenkundla esofeni yakho, kodwa unokujonga indlela abadlali abasabela ngayo kwiimeko ezithile. Ukuba umgcini wenqaku uyayijika ibhola, uyabaleka abuye anganikezeli ngokupheleleyo ngokuzikhusela, okanye ngaba ukhawuleza aphakame kwindawo yokutya yomchasi? Kubuza uSchmitz. Ezo nkcukacha zinokubonakala ngathi ziyenzeka, kodwa zinokukhanyisa ukuba umdlali angamelana njani nobunzima.
Ilanga lenze olo phononongo lwezihlanu eziphezulu … Iyavakala ingenangqondo kodwa kuninzi ukuqinisekiswa kuloo nto , Utsho uSchmitz. Kumntu ohlola esofeni [ongenayo] i-Intel kubaqeqeshi, ungasusa ezinye izinto kwimeko enjalo.
isahluko se-mandalorian 6
Lumkela iindawo ezingaboniyo
Ngamanye amaxesha umdlali ubekwa kwindima engahambelaniyo namandla akhe. Kungenxa yokuba umfo akayidubuli ukusuka kwi-perimeter ayithethi ukuba akanako ukuyidubula, utsho uScout X. Indoda enkulu yaseNorth Carolina uBrice Johnson, okhethwe ngama-25 nguClippers, ngumzekelo omhle wale nto. Wadubula u-zero 3 kwimisebenzi yeminyaka emine, kodwa uyakwazi ukudubula, utshilo uScout X. Indima kaJohnson kwiiTar Heels yayikukuphindaphinda, ukuseta izikrini, ukuziqengqa, nokulahla ii-lobs ngamandla I-Gronk spike . Uyenzile yonke loo nto kwinqanaba eliphezulu, ke ngekhe utyhole uRoy Williams ngokungamsebenzisi njengesithuba somgangatho.
Kodwa imiqondiso yayikho. UJohnson ubonise ukuthamba okuthambileyo ngaphakathi nangaphandle kweposti, kwaye wabetha iipesenti ezingama-78.3 zokuphosa simahla. Akumangalisi ukuba wakhawuleza wakhupha i-2s enzulu kwaye wazama ii-3 kwiligi yehlobo.
tobey umdlalo ka-maguire molly
Ngaba uMdlali unaso iSakhono se-Elite?
Iinkwenkwezi zifumana lonke ushicilelo, kodwa uninzi lwe-NBA lwenziwe ngabadlali abazalisa iindima ezikhethekileyo. Kuza kubakho amaxesha [kunye nethemba] apho sithi akangomdlali we-NBA, kodwa unesakhono esinye se-elite, utshilo uScout Y, ecaphula uDanny Green njengomzekelo. UGreen ujonge iibhokisi zomdlali odlala indima eyi-3-and-D ngqo eNorth Carolina, kodwa ebengenabuchule kwezinye iindawo zomdlalo wakhe, njengokupasa nokubamba ibhola. Ukugqithiswa kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo ukongeza [ekubeni ungobungangamsha kwenye] kubaluleke kakhulu, utshilo uSchmitz. Uluhlaza uphucule amandla akhe emva koyilo kwaye ekugqibeleni wafika kwindawo efanelekileyo kunye neSpurs, iqela elihlala ligxininisa ezona mpawu zibalaseleyo zabadlali balo. Umdlali onesakhono esinye okanye ezibini zepremiyamu unokwenza umsebenzi ophumeleleyo xa ewela kwiqela elifanelekileyo.
Kulumkele ukuthelekiswa kweCliché Superstar
Amathemba aphezulu asoloko ephawulwa njengomntu olandelayo; UBen Simmons unjalo elandelayo LeBron James kunye noBuddy Othandekayo uStephen Curry olandelayo . Ukumisela ulindelo oluphezulu olunje akukhokeleli kudano kuphela; ikwalahlekisa kananjalo. Umdlali ngamnye wahlukile kwaye akaze afane ngokuchanekileyo nomntu oza phambi kwabo, utshilo uRiddell. Ngekhe siphinde simbone umntu ofana noDraymond Green kwakhona, kodwa amaqela azakuzama ukufumana indoda enkulu elandelayo enokudala nokukhusela. Ke uthelekiso olungcono luthi ithemba liya kuzama ukugcwalisa indima efanayo kuGreen, hayi ukuba baya kuba nezakhono ezifanayo okanye ifuthe.
Cinga ngale ndlela: Ukuba ndiyakuxelela ukuba ndiza kuyibona ifilimu Ukufika kule veki, kwaye undibuze ukuba injani, ndinokuxelela ukuba kunjani I-interstellar . Kungenxa yokuba ngumboniso bhanyabhanya we-sci-fi okhuthaza uvakalelo. Kodwa isicatshulwa, abalinganiswa, kunye nengoma yesandi ayizukufana. Kukho ithuba Ukufika ayonwabisi njengokuba I-interstellar . Ke xa ulala-cofa, cinga ngendima umdlali anokuyizalisa, hayi umdlali othile aza kuba ngathi. Njengoko uScout Z wandixelelayo: Iofisi yethu yangaphambili ihleka ezinye zeekhomputha esizivayo kwiTV.
Gxila endaweni yeMeko yoMdlali
Indima yomdlali okanye imeko inokuthetha yonke into kwimpumelelo yakhe. UNigel Hayes ngumzekelo olungileyo woku, utshilo uRiddell. Unokuba ngumzuko we-4 ukuba angabamba kwaye adubule, kodwa ngekhe abenguye umntu onokuthi enze ukuba ityala lingene kuye, njengoko uWisconsin amcele ukuba enze kunyaka ophelileyo. U-Hayes uceliwe ukuba enze okuninzi kakhulu kwikholeji, ke oko kumenza abukeke ngathi lithemba elibi kakhulu kunokuba kunjalo.
Umdlali unokubekwa kwimeko emenza abonakale engcono kakhulu kunoko anjalo. USchmitz uthi ukhangele iikholeji ze-4s ezibonakala ngathi zi-slashers ezinamandla ezemidlalo, kodwa xa zichasene nephiko le-NBA kwaye kufuneka enze kwi-perimeter abanalo impembelelo efanayo. Kunokuba nzima ukuzibona ezi meko, kodwa uSchmitz ucebisa ukugxila kumdlali okwi-4. Ukuba ungumdubuli, kusenokwenzeka ukuba ngumlingisi ophumeleleyo we-NBA.
Ingaziva ngathi uzulazula kwi IWestworld maze xa ujonga uyilo, kodwa kulungile. Akululanga nakubani na. UScout X uthi uthanda ukubukela imidlalo njengomlandeli kunye nomvavanyi weetalente, kodwa andizange ndizame ukuba ngumphathi jikelele. Inqaku lakhe kukunciphisa iziphazamiso njengeqela lakho olithandayo ukusukela oko kwenzeka ngokukhawuleza. Ukukhangela kukufumana abadlali abanefuthe lokuphumelela; Vumela ukwakhiwa kwerejista kwenzeke kamva kwinkqubo.
Ibhola Yebhola Ekhatywayo
ngu-slim shady eminem
indlela yokuyeka i-lyft
isikere sokuthengisa uChris
UChris pine umphunga womoya
Kanye West kunye nengoma yakho